मोदी र सरिफको उपस्थिति चाहन्छिन मलाला
काठमाडौं, २५ असोज । यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजाईले आफूले पुरस्कार ग्रहण गर्दा भारतीय र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नवाज सरिफ दुबै जना उपस्थित भएको हेर्न
पाकिस्तानले आक्रमण नरोके कडा जवाफ दिने भारतको चेतावनी
काठमाडौं, २३ असोज । भारतले विवादास्पद कश्मिरमा पाकिस्तानले आक्रमण नरोके त्यसको कडा जवाफ दिने चेतावानी दिएको छ । भारतीय रक्षामन्त्री अरुण जेट्लीले आक्रमण जारी राखे पाकिस्तानले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने
मोदीले मोहित पारे अमेरिकाका भारतीयलाई
तारामणि सापकोटा बिर्तामोड, १३ असोज । भारतका प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीकोे एकपछि अर्को बिदेश भ्रमणले लोकप्रियताको नयाँ नयाँ किर्तिमान कायम गर्दै गएको छ । न्यूयोर्कको म्याडिशन हलमा आइतवार राती आप्रवासी
मोदीको भाषण सुन्न अमेरिकामा टिकट बिक्रीमा हाहाकार
एजेन्सी – अमेरिका भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले म्याडिसन स्क्वायर गार्डेनमा गर्ने सार्वजनिक सम्बोधन सुन्नका लागि न्युयोर्क सिटीको म्यानहट्टन एरेनामा आयोजना हुने रक कन्सर्टजस्तै टिकट बिक्री भएको छ ।
चीनमा करिब बीस हजारलाई दोस्रो बच्चाको अनुमती
बेइजिङ् । चीनको महानगर बेइजिङ्मा रहेका करिब बीस हजार जोडीले दोस्रो बच्चा जन्माउने अनुमती प्राप्त गरेका छन् । सरकारद्धारा गत फेबु्रअरीबाट परिवार नियोजनको नीतिहरुलाई केही खुकुलो पारिदिएपछि सो अनुमती प्राप्त
केटा नपाएपछि सामूहिक गुहार, कहाँकहाँ छ केटाको खडेरी ?
उमेर ढल्किँदै जाँदा बिहे गर्ने एउटा पनि केटा नपाएपछि सहरभरिका केटीहरुले सामूहिक रुपमा केटा पाउँ भन्दै गुहार मागेका छन् । यो ब्राजिलको घटना हो । ब्राजिलको नोइभा डो कोर्डेरियो
नेपाली किशोरीको दिल्लीमा सामूहिक बलात्कार
नयाँदिल्‍ली १० भदौ । भारतको नयाँ दिल्‍लीमा एक नेपाली किशोरी सामूहिक बलात्कारको सिकार भएकी छन्। काठमाडौं घर भएकी १९ वर्षीय नेपाली किशोरीलाई ६ जना ग्‍याङ रेप समूहले बलात्‍कार गरेको समाचार
२ महिलालाई भारतमा पहिलो पटक फाँसी
नयाँ दिल्ली,२९ साउन । भारतमा पहिलो पटक २ महिलालाई फाँसी दिन लागिएको छ। कोल्हापुरका रेणुका सिन्दे र सीमा गवितलाई जुनसुकै बेला फाँसी हुन सक्ने भारतीय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन्। नीहरुमाथि ९
भिख माग्दै गरेका करोडपती पक्राउ
रियाद – साउदी अरबमा भीख माग्नु अवैधानिक छ । एक भिखारीले भिख मागिरहेको देखेर त्यहाँका पुलिसले उक्त मानिसलाई पक्राउ गरेका छन् । पक्राउपछि भिखारीको सम्पत्तिको विवरण सुनेर पुलिसहरु आफै दङ्ग
कसले खसाल्यो मलेसियन एयरलाइन्सको विमान ?
किभ (युक्रेन), श्रावण ३ – भन्छन्— बाटो बिराएपछि जे पनि हुन सक्छ । कहिलेकाहीं नहुन पनि सक्छ । मलेसियन एयरलाइन्सका विमानका लागि बाटो बिराउनु नै सिद्धिनु बनेको छ । आफ्नो